Siyaasaa - Oromia Shall be Free - Page 20
Qabsoo Bilisummaa Oromoo maaltu laaffise ykn laaffisa?
Abdii Boruutiin Gaafiin akka mata dureetti kaase kun onnee Oromootaa, keessumaayuu kan warra dhimmi kun isaan ilaaluu fi qalbii isaanii harkisuu, akka tuqun yaada. Gaafiin …
Abdii Boruutiin Mata duree kanaan yoon barruu kana dhiyeessu, dhimma qabsoo kanaarratti maaliif ibsi ykn/fi labsi baha? Maaliif walga’iin godhama? Maaliif ejjannoon ibsama? …
Abdii Boruutiin Oromoon yoo mammaaku: “Ibidda fira jedhanii itti hin siqan ykn harkaan hin qaban, waan nama gubuufi; diina jedhanii irraa hin fagaatan, waan isa barbaadaniifi” jedha. …
Abdii Boruutiin Erga uummatni Oromoo gabrummaa Habashaa jalatti kufee kaasee hamma har’aatti, hidhaa fi ajjeechaan uummta keenyarra ga’an dhaabbatanii hin beekan. Kuni ammoo Oromoo …
Qaama rakkoo ta’uu dhiisanii, qaama furmaataa ta’uun dirqama Oromoo hundaa ta’uu qaba
Abdii Boruutiin Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti, yeroo ammaa, yaadni adeemsa siyaasaa karaa lamaan akka mul’atu, baruu mata duree “Dafanii bilisummaa …
Jijjiirama fiduuf tokkoomanii ciminaan hojjechuu dha malee, taa’anii jijjiirama eeguun homaa hin fidu
Abdii Boruutiin Akkuma meediyaalee gara garaarratti argamu fi dhaga’amu, obsi uummataa daangaa dabree; abbaa irreerratti warraaqsa godhuuf sochiin uummatoota Aafrikaa kaabaa, jijjiirama tokko ardii …
Qaanqee qabsoo bilisummaa uummata bal’aa humni kamiiyyuu dhaamsuu hin danda’u
Abdii Boruutiin Haalli addunyaa kanaa yeroo dhaa yerootti jijjiiramaa waan deemuuf, qabsoo bilisummaa uummata tokkoo daddafsiisee kan biraa ammoo haa tursiisu malee, uummatni gabrummaa …